Jonga ukuba ii-imeyile zethu zinabucala okanye hayi | Iindaba zeGajethi
Ngaba ukhona umntu olanda ii-imeyile zethu?
Ngokuziqhelanisa okuncinci, amava kunye namaqhinga athile, ngokuqinisekileyo umntu unokuzilanda ii-imeyile zethu, imeko engathandekiyo kuthi ukuba khange senze ngokungekho semthethweni nangaliphi na ixesha. Kukho ifayile encinci, umyalelo kunye nomyalelo obanjelwe ngokungagqibekanga kwiinkonzo ezithile ze-imeyile, eyi Umntu ophetheyo onokwazi ukunika ulwazi lwe-ip kwikhompyuter yethu.
Ukuba umntu une-IP yekhompyuter ukusuka apho sithumele khona i-imeyile, ngaphandle kwamathandabuzo loo mntu angayenza ukufikelela ukulandelela ii-imeyile zethu elektroniki ngokulula kakhulu; Ewe imeko inokubuyiselwa umva, oko kukuthi, ukuba siyazi malunga nala maqhinga mancinci (esiya kuwakhankanya apha ngezantsi), sinokubanakho ukwazi indawo apho umntu anokusibhalela khona imeyile.
1 Fumanisa ukuba kunokwenzeka ukuba ulandele ii-imeyile ngesicelo sewebhu
2 Jonga ngokwakho ukuba ngaba ii-imeyile zinokulandelwa na
Fumanisa ukuba kunokwenzeka ukuba ulandele ii-imeyile ngesicelo sewebhu
Ingcebiso enomdla kakhulu yokuba beze kuthi ukusikhankanya kwiindawo ezahlukeneyo ze-Intanethi, ibhekisa kwisicelo sewebhu, esisebenza kakuhle kwaye Isazisa ngamandla okanye ubuthathaka obunokuthi bube nenkonzo ethile ye-imeyile. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile ukwazi ukuba umntu unokubakho na ukulandelela ii-imeyile izixhobo ze-elektroniki, kukwenza la manyathelo alandelayo:
Yiya kwikhonkco lesicelo sewebhu (siya kulibeka ekupheleni kwenqaku).
Cofa iqhosha Qala kwaye ukope idilesi ye-imeyile esisibonelela ngale nkonzo; Akufanele siyivale le thebhu yesikhangeli.
Ngenisa iakhawunti yethu ye-imeyile (nokuba nguYahoo, Hotmail okanye uGmail).
Bhala umyalezo omtsha obhekiswe kwidilesi ye-imeyile enikezwe yinkonzo yangaphambili.
Akukho mfuneko yokubeka iSihloko okanye isiqu somyalezo, kufuneka sithumele iposi kuphela.
Kwibhrawuza yesicelo sewebhu umyalezo wempendulo uya kuvela, ngubani oya kuthi asixelele ukuba bayifumene i-imeyile kwidilesi yethu Ukuba inkonzo ibonelele ngedilesi ye-IP okanye hayi. Ukuba umyalezo ubonakala uluhlaza, oku kubonisa ukuba ubumfihlo bethu bukhuselekile, kwaye kunokwenzeka ukuba ubonakale ngathi ngumyalezo obomvu, obhekisa kwinto yokuba i-imeyile esiyithumela ngale nkonzo iya kuthumela iadress yethu ye-IP. .
Kanye njengokuba besikhe satsho ngaphambili ukomelela kweGmail kunye neYahoo, kufuneka sichaze ukuba eyokugqibela, ngokucacileyo iya kuhlala isazisa ngedilesi ye-IP Kumyalezo ngamnye esiwuthumela kwabo siqhagamshelana nabo, nto leyo ebonisa ukusilela kukhuseleko nakubucala beakhawunti yethu.
Jonga ngokwakho ukuba ngaba ii-imeyile zinokulandelwa na
Oko sikukhankanyile ngasentla luhlobo lwe Inkqubo ezenzekelayo exhaswa sisicelo sewebhu; Ngoku, ungaqinisekisa njani ukuba oku kuyinyani okanye bubuxoki xa umntu ekwazi ukulandelela ii-imeyile ngombane, isebenzisa ikhowudi yemvelaphi yemiyalezo esinayo kwi-inbox yethu; oku kuya kufuneka kuphela ukwenza le misebenzi ilandelayo.
Ukuba sisebenzisa i-Hotmail (okanye mandithi, Outlook.com), emva koko kuya kufuneka singene kwiakhawunti yethu ye-imeyile nakwibhokisi yemiyalezo engenayo, ukhethe nayiphi na imiyalezo ekhoyo apho kunye neqhosha lasekunene lempuku, emva koko ukhethe kwimenyu ngokweemeko kukhetho "lokujonga ikhowudi yemvelaphi".
Kule khowudi yomthombo, kufuneka zama ukufumana umyalelo we-X-Originatinh-IP, Ikhatshwa yidilesi ye-IP. Siqaphele ukuba lo myalelo awukho kwi-Hotmail, nangona ngaphambili ibifana, ebonisa ukuba ngoku inkonzo yeMicrosoft ibonelela ngemfihlo ngokupheleleyo ukuze izuze abasebenzisi bayo.
Singasebenzisa inkqubo efanayo ye-Yahoo, apho kuya kufuneka sifumane ikhowudi yemvelaphi yomyalezo ukwazi ukuba idilesi ye-IP yomntu oyithumileyo ityhilwe phaya. Ukwenza oku, kuya kufuneka sivule i-imeyile kuphela (kuyo nayiphi na unxibelelwano okanye umhlobo) kwaye emva koko ucofe ku "Okungakumbi" ukhetho; kukhetho oluzakuboniswa ngeli xesha, kuphela kuya kufuneka sikhethe leyo ithi «Jonga iNqaku elipheleleyo».
Njengakwimeko yangaphambili, iwindow enekhowudi yemvelaphi yomyalezo iya kuvela kwangoko. Apho siya kuzama ukufumana umyalelo ofanayo (i-X-Originating-IP), eya kukhatshwa yidilesi ye-IP. Ngokwesicelo sewebhu ebesikade sisebenzisa ngaphambili, lo myalelo uya kubakho kwikhowudi yemvelaphi, into esiyiqinisekisileyo ngokuqinisekileyo.
Ngoku, inkonzo yeGmail inokuphononongwa ngesandla; Ngale nto, kufuneka sivule nayiphi na i-imeyile evela kumhlobo (kuphela ukuya vavanya ukuba ngaba le X-Imvelaphi-ye-IP ikhona); ngokunqakraza kwi «impendulo»Siyabona ukuba kukho inketho esinokuze siyithathele ingqalelo, ethi«Bonisa iMvelaphil "; Ifayile yekhowudi yemvelaphi iya kuvulwa kwangoko kwaye apho, kuya kufuneka sijonge ukuba ngaba lo myalelo ukhankanywe apha ngasentla ukhona.
Ukuqukumbela okuncinci esikwenzileyo, singathi usetyenziso lwewebhu ukuba lusinika iziphumo ezichanekileyo Xa usazisa umsebenzisi ngamnye malunga nemfihlo yemiyalezo yabo kwiakhawunti nganye ye-imeyile, into esiyenzileyo ngesandla ngokungqinelana nomyalelo othile (X-Originating-IP) kwikhowudi yemithombo yawo nawuphi na umyalezo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Amaqhinga ukwazi ukuba ngubani ongene kwiakhawunti yam ye-imeyile
Usetyenziso lwewebhu - imeyilele
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ngaba ukhona umntu olanda ii-imeyile zethu?
Cofa kabini ukuvula iMac ngeKnock
Amaqhinga ukwazi ukuba ngubani ongene kwiakhawunti yam ye-imeyile